Sideed u wadaagi doontaa jacaylka? - Cuntooyinka giraangiraha
Sideed Ula Wadaagi Doontaa Jaceylka?
La wadaag Jacaylka dadka waayeelka ah xilligan fasaxa ah marka aad iibsanayso ama kireysato Subaru cusub! Laga bilaabo hadda ilaa Jan. 2 $250 waxay aadi doontaa sadaqo aad dooratay markaad iibsaneysid Subaru-kaaga - mid ka mid ah hay'adaha samafalka ee ah Cuntada Lugaha! Sanadkii 11-aad oo xiriir ah Subaru wuxuu u doortay Cunnada Wheels-ka mid ka mid ah afarta hay'adood ee samafalka ah ee ay 'Subaru' Wadaagaan Dhacdada Jacaylka.
Meals on Wheels waxay bixisaa cunno nafaqo leh iyo sidoo kale booqashooyin mutadawiciin saaxiibtinnimo ah oo loogu talagalay waayeelka iyo dadka naafada ah. Booqashadan iskaa wax u qabso ah ayaa xitaa ka sii muhiimsan xilligan sanadka, maadaama ciidaha ay u noqon karaan waqti cidlo dheeraad ah dadka keligood nool ama aan ehelka u dhowaan.
Markaad doorato Cunto on Wheels sida sadaqaddaada aad dooratay Subaru La wadaag dhacdada Jacaylka, waxaad siin doontaa waayeelka xiriirka aadanaha iyo nafaqada ay u baahan yihiin inay ku joogaan guryahooda oo ay madax bannaanaadaan. Ma jiro wax koobi ah oo ku saabsan inta Subaru ugu deeqi doono Wadaagiskeeda wadaagayaasha sadaqada jacaylka ee halkaa u bax oo hubi cuntada ku jirta sanduuqa Wheels markaad hesho Subaru-kaaga cusub!
Madaxa halkan si aad u heshid tafaariiqleyda deegaankaaga ee Subaru iyo inaad waxbadan ka barato Subaru's Share the Love.
Nofeembar 25, 2018